USA: Sida Hawlgallada Bariga Dhexe u wiiqeen awooddii Ciidammada Maraykanka – Kasmo Newspaper
USA: Sida Hawlgallada Bariga Dhexe u wiiqeen awooddii Ciidammada Maraykanka
Updated - October 12, 2017 2:16 pm GMT
London (Kasmo), Dagaalka Daacish ee ka soconaya Suuriya iyo Ciraaq wuxuu cadaadis culus oo joogto ah ku hayaa Ciidammada Qalabka sida ee Maraykanka.
Bishii Agosto oo qur ah, Isbahaysiga uu Maraykanka hoggaamiyo, waxay argagixisada ku hurgufeen in ka badan 5,000 oo bambo, oo noqonaysa “Rekord”-ka ololihii duqaynta ee biolowday Agosto 2014.
Si kasta ha ahaatee, Ciidanka Cirka Maraykanku wuxuu haystaa 55 qur ah, wax dhaqangal ah (Active) diyaaradaha dagaalka, taas oo ka yar 60% tiradii dhaqangalka ahayd dagaalkii Khaliijka ee sannadkii 1991kii.
Jack Detsch, oo uga soo warrama “Pentagon”-ka Barta Internetka “Al-Monitor”, wuxuu hoos u dhaca qalabka dagaal ee Maraykanka ku macnaynayaa, in ay ugu wacantahay, miisaaniyadda hooseysa iyo gabaabsiga diyaaradaha iyo duuliyeyaasha. Miisaaniyadda Militariga Maraykanka ee sannadka 2017 oo soo bilaabatay 1 Oktoobar 2016 ilaa 30kii September 2017 waxay la mid ahayd $ 793,7 Bilyan oo Dollar.
Si loo fahmo sababta sheekada Jack Detsch waa lagama maarmaan ah in la qeexo 4ta waaxood ee awoodda Maraykanku ka koobantahay iyo sida dhexdooda loogu kala qaybiyay Miisaniyadda sannadka 2017ka.
Midda 1aad waa Waaxda Difaaca (Department of Defence), midda 2aad waa Waaxda “OCO” (Overseas Contingency Operations) ama Hawlgallada Dibadda, 3aad waxaa soo galaya Hay’adaha ku hawlan Difaaca qaranka, sida Department of Veterans Affairs, State Department, Homeland Security, FBI & Cybersecurity, Department of Justice iyo National Nuclear Security.
Kharajka qalabka dagaalka ee Ciidammada Cirku wuxuu raacsanyahay miisaaniyadda Waaxda Difaaca. Khabiirku wuxuu sharraxayaa in 12kii bilood ee tagay Ciidanka Cirku hagaajiyeen sirdoonkooda, kuna guulaysteen burburinta 54,000 oo bartilmaameed oo Daacish ah intii u dhexeysay 2014 ilaa 30 September 2017.
Hawlgallada joogtada ah waxaa ku baxay kharaj aad u badan, diyaarad kasta oo Isbahaysigu waxay u baahatay shidaal laga buuxiyo, ugu yaraan, 5 jeer maalintii, halkii mar oo hawlgal ahba.
Taas oo keentay, qiyaastii, 65 jeer oo safar loo galo Gacanka Carbeed si loo soo dhaanbsado shidaalka, waxaana dheer iyada oo 13ka dal ee Isbahaysiga, Maraykanku yahay midka ugu badan hawlgallada ka socda Suuriya iyo Ciraaq.
Xoghayaha Ciidammada Cirka Maraykanka, Heather Ann Wilson ayaa dhowaan tiri: “In kasta oo Xukuumadda Ciraaq ka soo kabanayso burburkii Daacish, Ciidanka Cirka Maraykanku wali aad ayuu ugu lug leeyahay hawlgallada”.
Wilson waxaa kale oo ay ka digaysaa in Ciidammada Qalabka Sida ee Maraykanka ka jooga Bariga Dhexe dareemayaan culayska muddada dheeraatay ee Gobolka oo soo bilaabatay xoreyntii Kuwait, 1991kii. “27 sano oo hawlgallo Militari ah ka dib, waxaa wiiqantay awooddii aynu ku guulaysan lahayn dagaal kasta” ayay ku soo gabagabaysay Xoghaye Wilson
Si kastaba ha ahaatee, Khubaradu waxay qabaan in Miisaaniyadda Maamulka Trump ugu talagalay Ciidanka Cirka, sannadka 2018ka, oo gaaraysa $ 183 Bilyan oo Dollar, ka dabcin doonto walwalkii isa soo tarayay, siina xoojin doonto hawlgallada ka dhanka ah Daacish.